Ukukhuphela idatha epheleleyo yesitishi - ii-Geofumadas
Epreli, 2010 Topography
Ngaphambi kokuba sibone si khokelo ukusetyenziswa kwesitishi esipheleleyo kwi-cadastre, apho kubanjwa khona ulwazi.
Ngoku siza kubona indlela yokukhuphela idatha kwikhompyutheni, sisebenzisa enye yezikhokelo ezenziwe ngabanye bezakhono zam. Umsebenzi omkhulu, ngendlela. Ndiyisebenzela oku:
Isitishi esipheleleyo Sokkia Setha i-520
Ikhebula lokudlulisa idatha ye-USB
1. Ukucofa ngaphambili
Ngenxa yesizathu esingaqhelekanga, kunye nesitishi sam sokuqala sam, ikhefu lokudlulisa liwonakaliswe amaxesha ambalwa. Nangona a makhwenkwe lumkele, asikwazanga ukufumana izilungiso, ngaphezu kokungathi akukho bhanti, ubophe umsila kwenkomo Ndiyisebenzise loo ... ngemiphumo efanayo.
Ndibone ikhebula lokudlulisa (njengalowo uboniswa kumfanekiso) onayo ibhokhwe encinane apho i-chip efakwe khona, ngokugqithiseleyo, iyaphumelela ngakumbi kunayo ephakathi. Kwenzeka kum, ukuba kuloo nto xder lokuphelelwa yinto abayifakile kwaye bayisusa kwizinto eziphosakeleyo, kwaye oko kwabangela ukuba i-chip yatshiswa.
2. Lungisa isitishi ukuba uthumele
Ukuba inkokhelo yokudlulisa ixhunyiwe (I-USB kwi-serial converter), kuboniswa ukuba into esilindele ukuba idlulise idatha, kwaye yintoni esebenzayo:
MEM> UJOBO> ngoko senza faka.
Kwiphaneli elandelayo sikhetha Imveliso ye-Comms kwaye emva koko faka.
Emva koko sikhetha umsebenzi oza kudluliselwa. Qaphela ukuba xa ukhethwe, endaweni yokubonakalisa inani lamanqaku athathwe, utshintshela kwisicatshulwa phandle, oku kuthetha ukuba kulungele ukutshintshwa.
Oku kulandelayo kukhetha ukhetho olungileyo, ngesakhiwo SDR33, ngoko umyalezo uya kubonakala ubonisa ukuba uyadluliselwa, kunye nenani lamaphuzu enkqubo. Qaphela, oku kuyenziwe de udibaniso sele luqwalaselwe kwiprolink, echazwe ngezantsi.
3. Ukuqwalasela iprolink
Le projekthi Ngenxa yoko, senza Ifayile> iProjekthi entsha, kwaye sibela igama lefayile, eliza kugcinwa kwifomathi SPP. Oku kuya kuvulelwa kwikamva, xa sivalela inkqubo kwaye sifuna ukubuyela kwiprojekthi efanayo. Iprojekthi entsha eyenziweyo nganye UYOBO, ukuba kungekhona ... baya kundixelela.
Uxhumano Ngoku sineenkcenkceshela imifanekiso yokumkela, okanye Ifayile> Thumela-fumana. Emva koko siza kubona iphaneli yokukhuphela, apho sizakuqwalasela ezinye iiparitha:
En izicwangciso, siya kuqinisekisa ukuba ichweba ekuyisebenzisayo iya kuba COM4, isivinini sokudluliselwa kwexabiso (i-Baud rate) esiyikhethayo 1200, ubunye nanye, iifom data 8 kwaye uyeke uvimba 1. Oku kwenziwa kuphela kanye, kwaye ngamanye amaxesha kufuneka uzame ngaphezulu kwelichweba enye.
Ngeqhosha Dibanisa, uxhulumaniso luvavanywa, kwaye ukuba lufunyenwe, isitishi eso sibonakala ngegama siya kuvela:
Ifayile yeDETset yeSDR.
Iqhosha liyakushintsha Dibanisa ukhetho Ukukhubaza.
Ukutshintshwa. Xa ukhe ukhethwe, kunye neqhosha lokudlulisa (iintolo eziphambili), Qalisa ukukhuphela.
Qaphela, ngeli xesha kufuneka usebenze ukuthunyelwa kwisitishi esipheleleyo, esichazwe ekupheleni kwecandelwana 2.
Ekugqibeleni, umyalezo ogqityiweyo wokudlulisa kufuneka uvele. Yeyiphi injabulo, inkomo ayizange ingonakalise intambo.
Ukungenisa / ukuthumela ngaphandle Okwangoku, into esiyenzile ukutshintsha isethi yedatha. Ukuze bazingenise kwipaneli, senza Ifayile> Ngenisa, sikhetha iphakheji elandiweyo kwaye siyakwazi ukubona ulwazi oluluhlaza.
Yintoni ezayo ukuthumela izinto kwiDXF. Ngenxa yale njongo, ifayile > Exoprt, kunye nezinye iindlela ezichaziweyo.
Post edlulileyo«Edlulileyo Imephu yezobupolitika
Post Next I-Google Maps ukusuka kwi-Mobile Mapper 6Okulandelayo "
Iimpendulo ze-37 "Ukukhuphela idatha epheleleyo yesitishi"
umbuzo .. unako ukulayisha idatha kwi-TOTAL STATION sokkia cx-105 ngu-bluetooh
UGERARDO ALFONSO CASTRO ACUÑA uthi:
Abahlobo ndinendawo yokupaka i-maple 822l apho ndinokuyilanda khona inkqubo yale station
Sawubona Mhle kakuhle:
mna ukusebenza iyonke kwisikhululo Nikon dtm 531 kwaye andikwazi ukufumana kwisikhululo data yam pc bam, ndiqwalasele ukuba software yonakele, kuya kuba lula ukuba andincede ukulahlekelwa data zam PC lam. okanye ke, ufumana i-software entsha ukuyifaka. mbulela
nceda xa kukho umntu onondinceda ngesikhululo sokkia usethe i-630rk ingxaki endinayo kukuba esi sikhululo sasigcinelwe ixesha elihle kwaye ngexesha lokusebenzisa isikrini alibonakalisi umzobo we-prism okanye ikhadi okanye i-laser ayinakho Ukungabonakalisi isitshixo se-sft akwenzi ukuba lolunye ukhetho lubonakale lolwenzekileyo nceda ndingaxabisa kakhulu enkosi ngoncedo lwakho.
Othandekayo ndine-sokkia set550rx kwaye xa ndithatha i-puntso nge-prism ndifumana i-laser ngaphandle kwam ndinokukhetha i-laser okanye ukukhonkotha? Yinto eqhelekileyo okanye kukucwangciswa kuphela ndicela undincedise.
Umhlobo kwiingxelo ezandulelayo osinika isisombululo kufuneka uguqule umhla, unokuba kwi2011 kwaye ususe okubonwayo ukuvumelanisa ixesha nge-intanethi kwaye ulungele
VICTOR PIC uthi:
Mhlobo, ndingavuya kakhulu xa ungandithumela isikhokelo esikhawulezayo samandla e-sokkia samandla e2000 iyonke ukwenza uphononongo ngabaququzeleli. . Ndiyabulela kwangaphambili, ndibhala ndisuka eVenezuela, eSan Juan de los Morros, kwiGuarico State.
Siyazisola singenakukunceda ngale nto, kuba imigaqo yale sayithi ayivumeli ukusasazwa komxholo ophula ilungelo lobunikazi.
Molweni nonke, ndiyanibulisa ndisuka eGuatemala ... ikhonkco le-pro-link okanye i-topconlink ilungile kakhulu ukulanda idatha kwisikhululo esipheleleyo, sisebenzisa iziteshi ze-sokkia 330r kunye no-X kodwa inkxalabo yam okanye isicelo sam kukuba umntu angakwazi Dlula okanye undixelele ukuba uphantsi kwe-Civilcad 2013 kodwa ngesikhafu kuba sisixhobo sam somsebenzi, ngoku ndisebenza ne-Civilcad 2008 kodwa ndifuna ukukuhlaziya, nceda ulinde impendulo yakho, unganditsalela kwi-imeyile ...
Ndiyabulela isisombululo uVictor. Ndicinga ukuba kuya kuba luncedo, kwaye sele ndive abantu bebuza malunga nale ngxaki.
IMFUNI YESESU uthi:
IIMVUMO, KWAKHO IMITHETHO YONYAKA YONYAKA KUNYE I-ODD NABASEBENZI ABAKHONA, UKUQALA OKUYA KUZA IZINTO EZIBINI:
1) Faka umqolo (engenanto) kumqolo ngamnye data, oku kuya kuba engenanto KUNYE FILA idatha WELL BONKE FILE yenu
2) Ukuba idatha kuyo (yaye ngenxa yoko i-PASAS A txt) ngoko kufuneka ufake uphawu lomhlathi (ENTER) esiseleni RIGHT IKHOWUDI elandelayo, SO THE FORMAT KUFUNEKA KUBE KAKUHLE:
I-ID NEZ «ENTER» IKHODI (NGEXESHA ngalinye KWISITHI)
IDENTIFIER PO ID
N - OKANYE OKANYE OKUQHUBILEYO NAKWENKQUBO
I-E-ABSCISA OKANYE UMGAQO X
Z - UKUQALA NOMA COTA
IKHODI - IKHODI KANYE INKCAZELO
ENTER - PARAGRAPH MARKO OKANYE NGENYE
YIBA NOKUBALULEKILE KULO UKUTHENGA I "ENTER" IBANDLA, YENZA ISANGQA KULANDELEKILE, UZIBONELE NGEZOBOMI KWI-FOMU YEMPAHLA NOKUQHUTYELA [I-ALT] + [ENTER], NGOKUSENZA LONTO UZA KUBONA UKUZE KUTSHINTSHE IXESHA ELIHLE OKU KUQHUTYWA NGU-Txt KUNYE NEFOMU YOKUFUNDA
NDIQHELELA UKUBA UZISEBENZISA
carlos zamora uthi:
Njengokuba ndenza ukudlula i-txt yedatha kwi-sdr ye-esacion endiyenzayo nge-txt eyahlukana ngama-tabualaciones kodwa i-prolink ibonisa nje ukuba i-numbers inpares kwaye iimbini azizange zenziwe kodwa akunandaba. Ukuba umntu uyazi apho iphoso likho, nceda ndincede !! 1
Ndingathanda ukwazi ukuba ndingayifumana phi intambo yesikhululo se-foif rts 538 kuba intambo yayilahlekile kwaye ndifuna ukhuphe idatha endinceda
Inkqubo yekhonkco yeSokkia yayeka ukusebenza kuwo wonke umntu ngoMeyi, kodwa ndafumana isisombululo, okwethutyana ixesha.
Bafanele balibazise umhla wekhompyutha ukuya kuJanuwari okanye ngoFebruwari kwaye ulungele.
UPABLO ALARCÓN MARTÍNEZ uthi:
NDALUFUMANA PHI IFOMU »FUNA UPGRADE» YENKONZO YASEKKIA?
Ndiyinkathazo ine-sokkia i-530r Ndikho kwintsimi kwaye andinayo ikhebula njengoko ndenza ukukhuphela idatha nge-bluetooth ekubeni iqhagamshelo le-sokkia licela ukuba ndibuyekeze kwaye andinako. mbulela
rafael pabon uthi:
Sawubona! Yintoni eyenzekayo engaphenduliyo ukuhlaziywa <, sisenza njani ukuhlaziya iqhosha le-sokkia? Ndifuna ukusombulula sele ::
Ikhonkco yekhonksi iyayeka ukusebenza kwaye ndifuna ukuphucula, ndiqhuba njani inkqubo?
REYNALDO SANTOS uthi:
AMI UTHIXA KWAMI
ndincede ndisebenzise iqhosha le-sokkia ukuze ndikhuphele amaphulo am, kodwa ngoku ayifaki inkqubo endiyifunayo ukuze ndiphuculwe, ndiyibuyisa njani okanye ndiqhuba inkqubo
roberto ... sele sele ivuselela i-team yakho ye-carnalillo
Ndiyabuya ndizazama ...
Ngaphandle kokuba ifayile ivulwe njengekufundwa kuphela, inokuthi ibe uyivulile kabini, zama "ukuyigcina njenge" kwaye uyigcine njenge-dg elinegama elinye. Oko kuya kukuvumela ukuba uguqule ngaphandle kokuphazamiseka.
Hi molo I wonder xa umntu Masithathe isandla wenza uphando ngesimo niwele data ukusuka esikhululweni ukuya PC kwaye utshintsho format DXF kodwa ayikwazi ukuba ilungiswe kwi AutoCAD kwaye kokokuqala ukuba realiso lo msebenzi ukuba umntu akwazi ukunceda mna ndiza bangayithanda loo nto ......
Inyani yile yokuba yenza ukuba kube nzima kum ukukhuphela idatha.Ndiye ndane-prolink autocad 2011 kunye ne-civilcad, kodwa andazi ukuba yintoni ekwinqanaba lokugqibela.
Oko kuxhomekeke kuhlobo lwesixhobo osisebenzisayo. Ndisebenzise iProkink ngeziphumo ezilungileyo.
Kuthiwani ngezibingelelo ezivela eGuate !!!!!!!
Bebeto angathanda ukwazi indlela ukukhuphela phezu iingongoma eziliwaka isikhululo iyonke ukuya ikhompyutha ndiza kusebenzisa inkqubo TextPad kodwa ndivumele ukuba ukukhuphela phezu iwaka amanqaku bangathanda ukwazi ukwenza okanye inkqubo ukulisebenzisa ngathi ukuba mna ubabalo njani agradeceria !!!!!!!!!!
Njengoko ingavuli iifayile, awuboni idatha, okanye umyalezo nje uvele utsho ukuba ifayile ayikwazi ukuvulwa?
Kuya kubakho ukubona ukuba yiyiphi inguqu eyenziwe, ungasebenzisa I-View View ukuba uyiguqule kwinguqu oyisebenzisayo.
Ukuba ungangithumela umzekelo we-dwg eyenziwe
Makhe sibone ukuba ndifumanisa naziphi na izizathu.
Ndibhalela kuba ndimanzi ukuya entanyeni yam. Ndiye ndafunda ukusebenzisa kwisikhululo iyonke kunye lweenkcukacha (transit-> topograph98-> autocad14) kwi-PC. Ingxaki kukuba AutoCAD ayisebenzi kwi win14 7 kwaye ufake win XP (elinye iqela) mhlawumbi. laptop yam win7 kunye AutoCAD 2007 kwaye musa Habre DXF okanye iifayile dwg esabangela kunye topograph (ptos, triangulation kunye nentaba imigca); ukuba wenze, ndiye ndazama yonke esiyifumana kwi-intanethi (apho afakwe) kwaye kungekho tyala ... apho kuya kubakho isicombululo abathile koku?, nceda undizisele ethile Umgxobhozo data (ethembekileyo).
Intambo yokulahla iye yahlala yintlungu ye-h ... ubomi bonke. Xa izibuko beliphambili, azinikanga kangako, kwaye ndicinga ukuba iSokkia mayibonelele ngeendlela ezingaphezu kwesinye zokukhuphela kunye nezinye iindlela ezininzi namhlanje. (i-infrared, i-bluhlaza, amakhadi eememori, njl. njl.)
yifake kwaye uyihlaziye
hlaziya inkqubo ukuyifaka
iinkqubo zokufaka i-prolink 1.15 inguqulelo
Izimvo zakho kunye "nezokufundisa" zindincedile ukuba ndazi ukusebenza kwee-GPS ezincinci kunye nezikhululo zizonke, kuba eyunivesithi, xa sisebenza kwitogragi, sisebenzisa ii-theodolites zombane kuphela.
Ukuba ayininzi kakhulu ukuyibuza, ngaba unokunika ukuqhubeka kwesihloko malunga nomsebenzi wokuthungatha emva? Ndiya kuba nombulelo gqitha, ukususela ngoku ngoku ndigqiba ukufunda umsebenzi wokuvalela kwi-GPS kwaye kuyavakala kunomdla kum.
I-PD: Ukuba ufike eGuat ukunika ezinye izifundo, ungandisazisa, ndiza kuba nomdla wokuthatha inxaxheba kwaye ndikubuze, yenza izinto ezininzi, hahaha (i-imeyile pgsilvestre@gmail.com)
Ewe, ndiya kuba nalo uluhlu.
Uyakuva kwisifundo kakuhle, le veki heciendo a Uphando ngobume malunga liabilities yokusingqongileyo (Fosas ndiyenza amaqula ukuveliswa kwenkunkuma oli), kule meko wemihadi ukucocwa phantsi iindlela bioremediation, kodwa ndafumana ubunzima ukulahlekelwa data zam SOKKIA 630RK njengoko enabo Sokkia Link, mna wancomela ukusebenzisa ProLink waza wabona into entsha kum, nento endiya ukuchaza kwisifundo andikhonze into, ngoku bekuya kuba kuhle ukuba eyayinethombo amanqaku yokungenisa ezo 3d lwaseburhulumenteni okanye umhlaba AutoCAD kanye sele ukuqhubekekiswa data ne ProLink ngulomntu ukhokhelayo, njengoko kukho iindlela ezimbini mna kwisifundo, nguye uququzelelo kulinganiswa engile kunye nomgama kunye nezinye indawo target, Ndicinga ukuba kunceda abaninzi abalandeli le blog.
henry balcazar uthi:
inyaniso ndiyakuvuyisana nawe uya kuncedisa oku kakhulu kwaye kucace